यस्ताे आयो अछामको आइसोलेसन वार्डमा मृत्यु भएकी महिलाको कोरोना रिपोर्ट — Imandarmedia.com
१नेप्से परिसूचक ५९ अंकले घट्यो, ६ अर्ब ११ करोडमा सिमित भयो कारोबार
२उपचारका लागि भारत पुगेका डा. बाबुराम भट्टराई आज स्वदेश फर्किदै
३बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष घुस लिएको आठ लाख रुपैयाँ भुइँमा फालेर भागे
४प्रधानमन्त्री ओली आज झापा र मोरङ जाँदै
५यो वर्ष कोरोना महामारी अन्त्य नहुने डब्लूएचओको चेतावनी
६विप्लवसहितका ४ दलको जनसभा आज इटहरीमा, क कसले गर्दैछन सम्बोधन ?
७सुनको मूल्य तोलामा १७ सय रुपैयाँले घट्यो ,कतीमा भइरहेकाे छ काराेबार ?
८ट्याक्टरको ट्रलीले लागेर एक जनाको मृत्यु
९ट्रान्समिटर पड्किएर तनहुँको होटलमा आगलागी हुँदा ४० लाखको क्षति
१०ओली पक्षले सांसद् आफ्नो पक्षमा तान्न यतिसम्म गरेपछि…
११अनुहार चम्किलो बनाउने केहि घरेलु उपाय
१२४० अंकले बढ्यो शेयर बजार, सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक
यस्ताे आयो अछामको आइसोलेसन वार्डमा मृत्यु भएकी महिलाको कोरोना रिपोर्ट
अछाम । जिल्ला अस्पताल अछामको आइसोलेसन वार्डमा मृत्यु भएकी महिलाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। मङ्गलसेन नगरपालिका–५ की ५१ वर्षीय देवु विकको आइसोलेसन वार्डमै मृत्यु भएपछि कोरोनाको आशंकामा पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी सुर्खेत पठाइएको थियो।
एकाएक उच्च ज्वरो आएपछि ती महिलालाई यही वैशाख १५ गते अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख झनकराज ढुङ्गानाले बताए। उनको कोरोनाको आरडिटी परीक्षणको रिपोर्ट यसअघि नै नेगेटिभ आएको थियो। पिसिआर रिपोर्ट पनि नेगेटिभ नै आएको उनले बताए।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि कञ्चनपुरका स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइन रित्तिन थालेका छन् । क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरी भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आएकाहरु घर फिर्ता भएका हुन् ।
क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका व्यक्तिहरुको र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) परीक्षणमा नतिजा नेगेटिभ आएपछि सबै घर फिर्ता भएका छन् । भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिलाई राख्न नौवटै स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याएका थिए । नौ स्थानीय तहमध्ये चार स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा मात्रै ८६ जनालाई राखिएको छ ।
छ स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्ति घर फिर्ता भइसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णानन्द जोशीका अनुसार कञ्चनपुरका नौ स्थानीय तहमा ५४० श्यया क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये पुर्नवास नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ५० श्ययाको क्वारेन्टाइनमा १२, बेलौरी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको १०५ श्ययाको क्वारेन्टाइनमा ३६, लालझाडी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ८९ श्ययाको क्वारेन्टाइनमा १८ र बेलडाँडी गाँउपालिकाले सञ्चालन गरेको २३ श्ययाको क्वारेन्टाइनमा २० जनालाई राखिएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकामा १००, महाकाली नगरपालिकामा ५१, बेदकोट नगरपालिकामा ६४, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा २२ र कृष्णपुर नगरपालिकामा ३६ क्वारेन्टाइन श्यया सङ्ख्या रहेको छ । भीमदत्तमा १४५, महाकालीमा २२, बेदकोटमा २३, शुक्लाफाँटामा २२, कृष्णपुरमा ३१, पुर्नवासमा ३४, बेलौरीमा ६६, लालझाडीमा १२३ र बेलडाँडीमा १४ गरी ४८० जना क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरी घर फिर्ता भएको अधिकृत जोशीले बताए । उनका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेका, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य गरी एक हजार ७१९ को आरडिटी परीक्षण गरिएको छ ।
कञ्चनपुरमा भारतलगायत अन्य मुलुकमा आएकाको सङ्ख्या भने पाँच हजार ७७६ रहेको छ । पिपिइको सङ्ख्या ४३९ रहेको छ । हालसम्म नौवटै स्थानीय तहका ज्याला मजदुरी गरी जीविन निर्वाह गर्ने २२ हजार ५६९ परिवारलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
दिल्लीमा उपचाररत डा. बाबुराम भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पतालबाट आयो यस्तो जानकारी